Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Savalalana momba ny bilaogy toniziana · Global Voices teny Malagasy » Print
Tonizia: Savalalana momba ny bilaogy toniziana
Voadika ny 04 Aogositra 2018 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Naruto Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tonizia, Fiteny, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
(Lahatsoratra teny Anglisy efa amin'ny volana janoary 2010)
Ny “Tontolon'ny bilaogy Toniziana” dia vondron'olona mpampiasa aterineto sy bilaogera mahafatra-po na dia tsy betsaka tahaka ny ao amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina tahaka an'i Maraoka aza ny isan'izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity aho hampahafantra anao ny sasany amin'izy ireo.
Iray amin'ireo mpisavalalana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana i Hou-Hou , izay monina any Kanada ary mamoaka lahatsoratra amin'ny teny Frantsay na amin'ny teny Anglisy. Amin'ny ankapobeny ny lohaheviny mifantoka amin'ny teknolojia na olana ara-tsosialy any Tonizia sy Kanada. Izy koa no atidoha ao ambadiky ny mpanangom-botoatin'ny vondrona Toniziana voalohany sy malaza indrindra – tn-blogs .
Bilaogera malaza iray hafa i Adibs , izay mpitsabo biby. Ny blaoginy kosa dia miresaka momba ny olana ara-tsosialy samihafa ary ao anatin'ny onja voalohany amin'ireo bilaogera Toniziana izy. Manoratra amin'ny teny frantsay izy.
Mpanoratra GVO teo aloha avy any Tonizia i Subzero Blue  ary manoratra amin'ny teny Anglisy sy Arabo izy. Nanomboka ny hevitra fihaonan'ny bilaogera Toniziana izy ary ankehitriny manohana ny bilaogy madinika amin'ny alalan'ny twitter  ihany koa.
Tarek Cheniti , izay mpianatra ho dokotera mpitsabo ao Oxford, UK, manoratra betsaka ny lahatsorany amin'ny teny Anglisy, Frantsay ary Arabo. Amin'ity farany ity dia mampiasa ny fiteny Toniziana izy fa tsy Arabo Mahazatra. Manohana ny fampiasana ny fiteny Toniziana toy ny fiteny ofisialy ihany koa izy fa tsy Arabo Mahazatra. Mitantara betsaka momba ny lafiny ara-politika (ara-pitantanana), ny olana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin'ny lahatsorany koa izy.
Iray amin'ireo ohatra tsara amin'ny fahasamihafana ao amin'ny bilaogy Toniziana ny Diana Magazine , izay bilaogina mpianatra lalàna, manoratra amin'ny teny Arabo, Anglisy ary Frantsay. Tena liana amin'ny toe-draharaha politika any Liban sy ny fahafatesan'i Diana, Printsesin'i Wales [Pays de Galles] izy!
Yosra , koa dia bilaogera mavitrika hafa, manoratra manokana momba ny haivarotra sy ny media antserasera. Manampy amin'ny gazety fanampiny voalohany momba ny blaogy Toniziana isan-kerinandro ihany koa izy ary tompon'andraikitra amin'ny Loka Bilaogy Tonizia 2007. Bilaogera hafa liana amin'ny haino aman-jery an-tserasera sy ny web 2.0 i Mehdi Lemloum , izay manana bilaogy manokana mifantoka amin'ny varotra, seraseram-bahoaka sy ny baolina fandaka Toniziana.
Hatramin'ny taona lasa, nitombo ny isan'ireo blaogy amin'ny fiteny Toniziana sy Arabo. BTB  no bilaogera malaza manoratra betsaka amin'ny fiteny Toniziana amin'ny fomba manesoeso, raha i Khil we lil , izay manoratra amin'ny teny Frantsay sy ny fiteny Toniziana kosa no manoratra betsaka momba ny kolontsaina sy ny faritra atsimon'i Tonizia.
Mandritra izany, fandraisana andraikitra iombonana tarihin'ny bilaogera sasany izay mitsikera ny fampahalalam-baovao mahazatra any Tonizia sy ny fomba fampitana ny fampahalalam-baovao amin'ny lahatsoratra Arabo i Boudourou .
Saingy tsy mangina foana ny bilaogy Toniziana. Miteraka adihevitra be dia be ny bilaogy sasany rehefa miseho voalohany. Anisan'izany i Kifi , izay niteraka adihevitra ny fidirany ho mpanangom-baovao Toniziana, noho ny fironana ara-nofon'ny mpanoratra azy. Kifi dia midika hoe “mitovy amiko” amin'ny fiteny Toniziana. Rehefa avy nilaza izany, dia tsy izany no bilaogy voalohany tantanin'ny bilaogera pelaka. Mon enfer  no voalohany. Samy manoratra amin'ny teny frantsay ireo bilaogera roa tonta ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/04/124036/
 Adibs: https://mg.globalvoices.org http://adibs1.hautetfort.com/
 Mpanoratra GVO : https://globalvoicesonline.org/author/subzeroblue/
 Subzero Blue: http://www.subzeroblue.com/
 Tarek Cheniti: http://tarek-cheniti.blogspot.com/
 Diana Magazine: http://dianamagazine.blogspot.com
 Mehdi Lemloum: http://pinklemonblog.blogspot.com
 Khil we lil: http://khilwelil.blogspot.com/
 Mon enfer: http://mon-enfer.blogspot.com/